Mamwe Midziyo Inosimudza, Mota Creeper & Shop Press Suppliers | EPONT Jack
Imba > Zvigadzirwa > Kumwe Kusimudza Midziyo
Kureba kwemota creeper kwakaderera, iyo inovimbisa kugona kwayo kwemotokari uye kunogona kupfuudza pasi pasi pemota. Izvo zvakakodzera kune ese marudzi ese emotokari uye hazvigone chete kushandiswa kweimba, asiwo kune zvitoro zvina 4s.
Chimiro chemotokari chinogadzirwa nemotokari chakagadzirwa neyema pombi, chinogona kutakura huremu hwemazana matatu e300 uye inogona kushandiswa nemunhu mukuru murume mukuru akarara pazviri. Pamhepo yeiyo pombi yakafukidzwa nependi, iyo inogona kudzivirira ngura uye kuwedzera hupenyu hwebasa.
Kune gumi nematanhatu mavhiri pasi rose pazasi pemotokari yemotokari iyo inochinjika uye nharembozha. Iwe unogona kudzora mota inokwira mota kuti utarise kona yega yega yemotokari chassis pasina kusiya chero kona yekuchengetedza.
Iyi shopu shopu yakagadzirirwa kururamisa, yakakotama, ichimanikidza, uye kusimuka.
Iyo Jack Sampula Ratidza
Sampule yejack show.Zvigadzirwa zvedu zvakapfuura CE, GS & Tuv chitupa cheEuropean Union. Hunhu hwezvigadzirwa zvedu ndezvechokwadi uye zvakavimbika. Ivo vanotengeswa zvakanaka mumisika yeEuropean neAmerican. Zvigadzirwa zvese zvinotora Electrostatic nharaunda dziviriro pendi uye - 45 ° Hyddraulic Oiri, saka ivo vanogona zvakare kushandiswa munzvimbo dzinotonhora zvakanyanya. Ndokumbira uti tivimbe EPONT. Kana tikasarudza EPont, ticharamba tichiita zvirinani uye zvirinani